Iincwadi ezi-7 eziwine i-Oscar ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo | Uncwadi lwangoku
Ngobu busuku, nakunyaka omnye, sinesona siganeko sibalulekileyo kwi-cinema. Inkqubo ye- Amabhaso ama-Oscars ngubani ojika 90 le 2018. Ke le Ushicilelo lwama-90 yegala iqala ngo-17.00: XNUMX p.m., ngo Los Angeles, apha apha iya kuba yi-02.00. Iya kuba kwi IDolby Theatre kwaye uyibeke kwakhona UJimmy Kimmel.
Njengobudlelwane Uncwadi kunye nomdlalo bhanyabhanya Akuthandabuzeki ukusukela ekuzalweni kobugcisa obubizwa ngokuba sisixhenxe, kulo nyaka kukho iifilimu ezikhethiweyo ezisekwe kwiincwadi ezinje Ndibize ngegama lakho o Owona mzuzu umnyama (Yiza kuGary, uphantse wayifumana!). Kodwa namhlanje ndijonga kwakhona Izihloko ezi-7 eziphumelele i-Oscar kwifilimu efanelekileyo. Zininzi ezinye, kodwa ndizikhethile.
1 URebecca -Daphne Du Maurier
2 Ukusuka Apha ukuya ngonaphakade - uJames Jones
3 UTom Jones-uHenry Fielding
4 Uncumo kunye neenyembezi- uMaria Von Trapp
5 U-Oliver Twist -Charles Dickens
6 Ukudanisa neengcuka - uMichael Blake
7 Isigulana esingesi-Michael Ondaatje
"Izolo ndiphuphe ndibuyela eManderley ...". Esi sisiqalo esingalibalekiyo soku yodidi yeluswa nguwe UAlfred Hitchcock. Baneenkwenkwezi kuyo U-Laurence Olivier, NjengoMaxim de Winter, umnini weManderley uthe phithi yimemori yomfazi wakhe wokuqala ongasekhoyo; UJudith Anderson, njengokukhathaza uNkskz Danvers, kwaye Ifonti kaJoan, Nkskz De Winter omtsha. Iphumelele ii-Oscars ezimbini (zeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kunye neyona sinema ibalaseleyo) kwi 1940.
UDu maurier Ndiqale ukuyibhala 1937, e-Aleksandriya (i-Egypt) kunye nempumelelo yayo kangangokuba inike igama layo, umzekelo, kwiRebecca syndrome, okanye umona ongalawulekiyo. Kodwa yaqwalaselwa njenge inoveli yokuqala enkulu ye-gothic yekhulu lama-XNUMXnjengoko iqulethe imfihlakalo, indlu enezidlakudla, ukubulala, isikhohlakali esibi, uthando, umlilo, indawo eyoyikisayo kunye nokubonakala komfazi onamandla.
Ukusuka apha ukuya kunaphakade -UJames Jones
Akukho ndlela umntu ongakhange abone ngayo imeko yothando oluncamisayo phakathi kweBurt Lancaster kunye noDeborah Kerr kule klasikhi evela kumlawuli UFred zinneman. Wamsa kwiimovie kwi 1953 kwaye uphumelele ii-Oscars ezisibhozo, kubandakanya owona mboniso bhanyabhanya ubalaseleyo, oyena mlawuli ubalaseleyo, oyena mlingisi uhlengahlengisiweyo, oyena mdlali uxhasayo kunye nomdlali weqonga ongcono. Banenkwenkwezi nayo UFrank Sinatra, Ukunyuka kweMontgomery y Ingcongolo kaDonna.
Isekwe kwinoveli ngu 1951 ngumbhali waseMelika uJames Jones kwaye ubalisa ibali lokufika kwejoni IPrewitt (Clift) kwinkampu yamajoni yaseHawaii 1941. Apho uya kungqina ubungqina be- ubudlelwane kunye neengxabano kukhuliswe yimeko phakathi kwabaphathi babo, abahlobo babo kunye noontanga babo. Kwaye ngaphezulu kwabo isithunzi sokuhlaselwa kweJapan Pearl Harbour.
Tom Jones -UHenry Fielding
U-Fielding wayengumbhali wenoveli oliNgesi kunye nomdlali odlalayo Inkulungwane XVIII waziwa ngemibhalo yakhe ehlekisayo kunye nehlekisayo. Ithathelwa ingqalelo njenge umyili wenkcubeko yesiNgesi yenoveli Kunye nabantu bexesha lakhe USamuel Richardson. Le yeyona noveli yakhe idumileyo neyaziwayo, iphantse yathathelwa ingqalelo iQuixote yoncwadi lwesiNgesi.
Olu tshintsho lwalukhokelwe ngu UTony richardson, Ufumene amagama atyunjiweyo ali-10 kwaye uthathe Ii-Oscars ngo-4ze ibhayisikobho, umlawuli, uhlengahlengiso kumdlalo weqonga, umculo. Baneenkwenkwezi kuyo UAlbert Finney, uSusannah York kunye noDavid Warner phakathi kwabanye. Bala i Ihambo ezithandekayo nezingamanyala NguTom Jones, izifundo eziphambili zolu daba lokuzibamba olubonisa abalinganiswa bazo zonke iintlobo zoluntu lwexesha.
Uncumo neenyembezi -Umaria Von Trapp
Ndithini ngalento umculo weklasikhi phakathi kweklasikhi… Nabani na ongaziyo malunga nosapho lweVon Trapp okanye akashukunyiswa nguCaptain Von Trapp kunye nokucula kwakhe ikatala Edelweiss kukuba wayehlala kwenye iplanethi.
Ewe ibali lokwenyani laxelwa UMaria von Trapp, umfana osandul 'ukuvukela osuka kwikhaya loonongendi laseNonnberg eSalzburg, othunyelwa ngumphathi wakhe kwindlu yengqongqo yeBaron Von Trapp, owayengqongqo kwaphela. Umhlolokazi kunye neqhawe lomkhosi wamanzi wase-Austrian, ibaron ifuna a umphathi yabantwana bakhe abaninzi. UMaria kunye nomculo wakhe bangena kubomi babantwana kunye nomphathi kwaye bazuze iintliziyo zabo.
Umboniso bhanyabhanya wamalathisa URobert Wise kwaye uphumelele Ii-Oscars ezi-5, phakathi kwabo, yeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kwi 1965. Kwaye bafaka inkwenkwezi kuyo UJulie Andrews, uChristopher Plummer kunye no-Eleanor Parker phakathi kwabanye.
U-Oliver Twist - uCharles Dickens
Olunye lolungelelwaniso oluninzi loku Dickens umsebenzi ongafiyo ibiyilento zomculo, isihloko Oliver!, eyaqala ukuboniswa kwindawo yokubonela, e ILondon West End, ngo-1960. Ngo-1963 yaqhutywa Broadway kwaye waphumelela amabhaso aliqela eTony. Kwaye ngaphakathi 1968 Inkulumbuso kwiscreen esikhulu ngesandla se UCarol yingcongolo. Unayo Ii-Oscars ezi-5, Eyona bhanyabhanya ibalaseleyo, umlawuli, umkhombandlela wobugcisa, isandi kunye nesandi.
Yayinenkwenkwezi ngamagama abonisa indawo yaseBritane njenge Iirum moody njengoFagin, inkwenkwe Umark lester njengenkedama uOliver, kunye a U-Oliver Reed zintle kwezothusayo Ibhili yesil onokuyicinga.
Ukudanisa neengcuka -UMichael Blake
Lonke ihlabathi silibonile Imuvi, kodwa ababaninzi kangako abayifundileyo le ncwadi ibhalwe nguMichael Blake 1988. UBlake wayenjalo umbhali wesikrini eyokuqala awayisayinayo yayikwangumboniso bhanyabhanya ohamba nendoda eselula ngelo xesha UKevin Costner, Waba ngumhlobo omkhulu naye. Enkosi kuye, uBlake waba Uholo ku hollywood, athe wasebenzisa eli thuba emva kokupapashwa kwale noveli, owona msebenzi wakhe waziwa kakhulu, a Ingoma yenkululeko kunye nozuko kubemi bomthonyama kumathafa amakhulu aseMelika.
UBlake ngokwakhe wayilungelelanisa nomdlalo bhanyabhanya kunye no-Costner njengomlinganiswa ophambili kunye ne 1990Emva kwempumelelo enkulu emva kokukhululwa kwakhe, yena, uCostner (njengomlawuli) kunye nefilimu waphumelela i-Oscar kunye nezinye ezine zokuhlela, ukufota, isandi (esimangalisayo nguJohn Barry) kunye nesandi.
Isigulana esingesi -UMichael Ondaatje
Okunye umdlalo weqonga ukuphela. Ukulungelelaniswa kwefilimu kule noveli nguMichael Ondaatje awapapasha kuyo 1992 wasusa Ii-Oscars ngo-9, kubandakanya oMfanekiso oBalaseleyo, uMlawuli, uMlingisi oxhasayo, uHlelo, iCinematografi, iStracktrack, isandi, okanye uHlelo. Kusenokwenzeka Ngenye yezo bhanyabhanya ezigqithileyo kubhalo lwantlandlolo kuba baziboleka kolo hlengahlengiso oluhlala lukhanya kwiscreen esikhulu.
Ibhalwe ngokwamanqanaba amabini kwaye isekwe kwinkumbulo yomnye wabalinganiswa, babhala imifanekiso egcwele idrama, iqulethe iimvakalelo kunye nabalinganiswa abangcungcuthekisiweyo kwisakhelo seentsuku zokugqibela zeMfazwe yesibini yeHlabathi. Kwakunenkwenkwezi URalph Fiennes, uJuliette Binoche kunye noWillem Dafoe phakathi kwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iincwadi ezi-7 eziwine i-Oscar ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo
ULuis Chavez sitsho
Ngokwodliwanondlebe kunye noCostner ngokwakhe, Ukudanisa neengcuka kwakuqala ngesikripthi, okanye ubuncinci yile ndlela ayicebisa ngayo, ke umbono oqulathwe apha uya kuba ungalunganga.
Phendula uLuis Chávez
UJose Barboza sitsho
Iphepha elihle, Siyavuyisana.
Phendula kuJosé Barboza